PressReader - Isolezwe: 2018-07-13 - Babanjwa inkunzi emini eNquthu
Babanjwa inkunzi emini eNquthu
Isolezwe - 2018-07-13 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
UMPHAKATHI waseNquthu wethuka izanya ngenxa yeqembu lezigebengu elidlangile elibamba abantu inkunzi emini ezingxenyeni zasedolobheni baphucwe amakhadi asebhange namaselula.
Lezi zigebengu kukhalwa nangokuthi sezibhubhisile emzini eyakhele idolobha egqekezwa emini kuphinde kushaqwe izimpahla zabantu.
Izigameko zakamuva ezishiya umphakathi uthukile kube ezangoLwesibili kuleli sonto lapho kubenabathathu ababeyizisulu zokubanjwa inkunzi bekhonjwe ngemimese.
“Siqale saxwaya kufika umfana waseSandlwane kwaHadebe ekhala esitshela ukuthi ubanjwe inkunzi iqeqebana labafana limbeke ummese entanyeni omunye bewubeke esiswini bethi akabanikeze amakhadi asebhange neselula. Uthe ubephuma esitolo ngaseBambazonke ehamba emgwaqweni ongakwamasipala nobheke elokishini. Uthe laba bafana bamubuze ukuthi ithini inombolo eyimfihlo yokukhipha imali ,wathi akayazi ngoba ikhadi akusilona elakhe. Bavele bathi akafonele umnikazi wamakhadi ngoba uma engakwenzi lokho bazomgwaza. Lapho uthi abantu bebedlula emaceleni bengamlekeleli. Kuthe uma sebemdedelile wafika kithi wacela simfonisele udadewabo ukuba angalokothi ayisho iPin yakhe uma efonelwa ngoba izigebengu lezo esezimphuce konke kanye nemali yokugibela. Kuthe kusenjalo kwaba omunye wesifazane naye ophucwe amakhadi neselula . Lona uthe ungowakwaGama. Laba fana bayaziwa lapha eNquthu ngoba bahlala ezindlini ezibomvu okudayiswa kuzo ukudla okubizwa ngokuthi ugqoko namabhiya. Bona sekunesikhathi beyenza lento ngoba siyibona ngabantu abasuke sebekhala bezocela sibagibeze mahhala. Siyayiqala thina lento eNquthu ngoba sijwayele ukwebiwa kwezinkomo hhayi ukubamba abantu inkunzi,” kusho omunye wabashayeli bamatekisi ocele kugodlwe igama lakhe.
IMeya yaseNquthu, uMnuz Mabilabila Kunene, ithe bakhathazeke kakhulu ngokudlanga kobugebengu eNquthu.
“Sengize ngabanomhlangano naboMnyango wamaPhoyisa ngicela basilekelele bandise amaphoyisa azulazula edolobheni ukuze siqinisekise ukuthi umphakathi uphephile,” kusho uMabilabila.
Uqhube wathi kubaphatha kabi lokhu ngoba idolobha labo lihanjelwa izivakashi ezisuka emazweni aphesheya zilethe umnotho njengoba zisuke zivakashele izindawo zomlando okuyiseNcome, eSandlwane naseMangeni River Fall.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Thulani Zwane uthe nakuba zingekho izigameko eziyamaniswa nalobu bugebengu asebebikelwe ngazo kodwa banxusa umphakathi ukuba ubike emaphoyiseni ngezehlakalo obhekana nazo.
“Siyacela ukuba umphakathi ukukhuthalele ukuyobika emaphoyiseni uma kunezehlakalo zobugebengu ezenzekayo ukuze abomthetho bakwazi ukusukuma,” kusho uZwane.